Rafitra afovoany sy ivon-toerana - Cazoo
Rafitra afovoany sy foibe
Home » Home » Rafitra afovoany sy foibe
tenifototra: rafitra afovoany, rafitra itsinjaram-pahefana
Fotoana famakiana: 1 minitra
Ny foto-kevitr'i fampiorenana dia manondro ny fizarana fahefana sy fahefana amin'ny fikambanana na tambajotra. Rehefa afovoany ny rafitra iray dia midika izany ny rafitra fandrindrana sy fanapaha-kevitra dia mifantoka amin'ny teboka iray antsipirian'ny rafitra.
Ny rafitra fitantanana, ny lalàna mifehy, dia ilaina amin'ny rafitra rehetra. Raha tsy misy izany dia tsy misy fanapahan-kevitra horaisina izay manome lalana ny sisa amin'ny tambajotra. Ny haavon'ny fitantanana dia mety miainga amin'ny famaritana ny lalàna ifotony ka hatramin'ny fitantanana micro ny asan'ny rafitra tsirairay.
Ao amin'ny rafitra afovoany, ivon'ny fahefana manome alàlana sy mampihatra fanapahan-kevitra, izay avy eo lasa tany amin'ny ambaratongam-pahefana ambany.
Ny mifanohitra amin'ny rafitra afovoany dia rafitra décentralisées, izay andraisana fanapahan-kevitra amin'ny fomba mizara fa tsy misy fandrindrana fahefana foibe.
Ny fanontaniana lehibe amin'ny adihevitra eo amin'ny ivon-toerana sy ny fanapariaham-pahefana dia ny hoe tokony hitranga amin'ny ivon'ny tamba-jotra ve ny pitsopitsony amin'ny fizotran'ny fanapaha-kevitra, na alefa miala amin'ny fahefana foibe.
Mety misy maromaro tombony amin'ny fanamafisana:
Ny tetika maharitra dia azo fehezina tsara
Ny andraikitra dia voafaritra tsara ao anatin'ny rafitra
Haingana sy mazava ny fandraisana fanapahan-kevitra
Ny fahefana afovoany dia liana amin'ny fanambinana ny tambajotra iray manontolo
Ny sasany amin'ireo fatiantoka amin'ny fanamafisana mety ho:
Fifandraisana diso sy tsy fitoviana eo amin'ny afovoany sy ny toerana hafa
Mety hisy ny kolikoly
Mila mitazona ny herinaratra amin'ny ambaratonga avo kokoa
Fanilihana ireo mpisehatra eo an-toerana izay manana fahalalana na fahaizana manokana
Talohan'ny nahaterahan'i Bitcoin dia finoana iraisana fa tsy afaka namolavola tambajotra itsinjaram-pahefana izay nahazoana ny marimaritra iraisana nefa tsy nisy fihenan-danja.
Na izany aza, miaraka amin'ny fampidirana Bitcoin, ny tambajotran-tserasera iray dia nanjary safidy azo atao amin'ireo afovoany. Izany no nahatonga ny adihevitra teo amin'ny foibe sy ny fanapariaham-pahefana nivelatra kokoa ary nanome safidy hafa mety ho an'ny rafitra herinaratra misy.
Lahatsoratra talohaInona no tambajotra tsy misy atokisana, tsy mila fitokisana
Havaozina: Ahoana ny fomba hahitana ireo mari-pamantarana manao X100 alohan'ny tara?